ဗိုလ်ချုပ်ပိုက်ဆံ တစ်ထောင်တန်နဲ့ ဈေးဝယ်လို့မရတဲ့အကြောင်း ပြောပြလာတဲ့ လူတစ်ဦး – ျမန္မာသတင္းစံု
ပြီးခဲ့တဲ့ ဇန်နဝါရီလ ၇ ရက်နေ့မှာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပုံပါ မြန်မာငွေကျပ် ၁၀၀၀ တန်တွေကို ပြည်သူတွေလက်ထဲ ဖြန့်ချိခဲ့ပါတယ်…..နိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်ကနေ တရားဝင်ဖြန့်ချိခဲ့တာဖြစ်ပြီး လက်ရှိအချိန်မှာလည်း ပြည်သူတွေလက်ထဲ သုံးစွဲနေကြတာပါ…ဒါပေမယ့် လတ်တလောမှာတော့ ဗိုလ်ချုပ်ပိုက်ဆံနဲ့ ဈေးဝယ်ရာမှာ ဝယ်လို့မရတဲ့ ဖြစ်စဉ်တစ်ခု ဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့် တရားဝင်သုံးခွင့်ရှိမရှိ မေးခွန်းထုတ်ထားတဲ့ Post တစ်ခု လူမှုကွန်ရက်မှာ လူပြောများနေတာပါ…..
ကိုလှိုင်ဝင်းထွန်းဆိုသူက အဲဒီအကြောင်းကို ခုလို လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာ ပြောပြထားတာပါ….
“ကျွန်တော့်နာမည် လှိုင်ဝင်းထွန်းပါ …မော်လမြိုင်ကျွန်းမြို့နယ် မြင်းကကုန်းကျေးရွာမှာနေပါတယ်…ယနေ့ညနေ ၅နာရီခန့်အချိန်တွင် ကျွန်တော်မိသားစုနှင့်အတူ အိမ်အတွက်လိုအပ်သောဆန်ဝယ်ရန် ငွေစံပါယ် ဆန်စက်သို့ ဆန်သွားဝယ်ခဲ့သည်…
ဆန်အိတ်တန်ဖိုးမှာ ၃၂၀၀၀ ကျ၍ မိမိမှာပါလာသော ၅ထောင်တန် ၆ရွက် ၁၀၀၀ တန် ၁ရွက် မိမိအင်မတန်မြတ်နိုးသော ဗိုလ်ချုပ်ပုံပါ ၁၀၀၀တန် တစ်ရွက် စုစုပေါင်း ၃၂၀၀၀ ကျပ် ပေးခဲ့ရာ အရောင်းဝန်ထမ်း စာရေးမမှ ဗိုလ်ချုပ်ပုံပါ ငွေစက္ကူအား သုံးစွဲမရဟုဆို၍ပြန်ပေးခဲ့ပါသည်…သို့ဖြစ်ပါ၍ နိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်ဥပဒေနှင့်အညီထုတ်လုပ်ထားသောငွေစက္ကူသည် တန်ဖိုးအာမခံမရှိဖြစ်နေပါသည်…
ထို့အတွက် ဗိုလ်ချုပ်ပုံပါငွေစက္ကူသည် တရားဝင်သုံးစွဲခွင့်တန်ဖိုးရှိမရှိသိချင်ပါသည်… စက္ကူသက်သက်ထုတ်ထားခြင်းဖြစ်လျှင်လည်းသိမ်းထားပါတော့မည်…သို့မဟုတ် သုံးစွဲခွင့်ရှိလျှင်လည်းသုံးမရပြောသူအား မည်သို့အရေးယူမည်ကိုသိချင်ပါသည်…ကိုလှိုင်ဝင်းထွန်း..၁၄/မမက နိုင် ၁၅၄၇၆၇..” ငွေရှင်းရာမှာ လက်မခံတဲ့ အခြေအနေကို ပြောပြထားတာပါ….
ဒါကြောင့် လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာ ငွေချေတာလက်မခံတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ပိုက်ဆံအကြောင်းလူပြောများနေတာဖြစ်ပါတယ်… ဒီလိုကြီးတော့ မဖြစ်သင့်ပါဘူးနော်…ဗိုလ်ချုပ်ကို ချစ်တဲ့ ပရိသတ်ကြီးရော ဘယ်လိုမြင်လဲ ပြောပြခဲ့နော်..
ၿပီးခဲ့တဲ့ ဇန္နဝါရီလ ၇ ရက္ေန႔မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းပုံပါ ျမန္မာေငြက်ပ္ ၁၀၀၀ တန္ေတြကို ျပည္သူေတြလက္ထဲ ျဖန႔္ခ်ိခဲ့ပါတယ္…..ႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္ကေန တရားဝင္ျဖန႔္ခ်ိခဲ့တာျဖစ္ၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္မွာလည္း ျပည္သူေတြလက္ထဲ သုံးစြဲေနၾကတာပါ…ဒါေပမယ့္ လတ္တေလာမွာေတာ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ပိုက္ဆံနဲ႔ ေဈးဝယ္ရာမွာ ဝယ္လို႔မရတဲ့ ျဖစ္စဥ္တစ္ခု ျဖစ္ပြားခဲ့တာေၾကာင့္ တရားဝင္သုံးခြင့္ရွိမရွိ ေမးခြန္းထုတ္ထားတဲ့ Post တစ္ခု လူမႈကြန္ရက္မွာ လူေျပာမ်ားေနတာပါ…..
ကိုလႈိင္ဝင္းထြန္းဆိုသူက အဲဒီအေၾကာင္းကို ခုလို လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာမွာ ေျပာျပထားတာပါ….
“ကြၽန္ေတာ့္နာမည္ လႈိင္ဝင္းထြန္းပါ …ေမာ္လၿမိဳင္ကြၽန္းၿမိဳ႕နယ္ ျမင္းကကုန္းေက်း႐ြာမွာေနပါတယ္…ယေန႔ညေန ၅နာရီခန႔္အခ်ိန္တြင္ ကြၽန္ေတာ္မိသားစုႏွင့္အတူ အိမ္အတြက္လိုအပ္ေသာဆန္ဝယ္ရန္ ေငြစံပါယ္ ဆန္စက္သို႔ ဆန္သြားဝယ္ခဲ့သည္…
ဆန္အိတ္တန္ဖိုးမွာ ၃၂၀၀၀ က်၍ မိမိမွာပါလာေသာ ၅ေထာင္တန္ ၆႐ြက္ ၁၀၀၀ တန္ ၁႐ြက္ မိမိအင္မတန္ျမတ္ႏိုးေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ပုံပါ ၁၀၀၀တန္ တစ္႐ြက္ စုစုေပါင္း ၃၂၀၀၀ က်ပ္ ေပးခဲ့ရာ အေရာင္းဝန္ထမ္း စာေရးမမွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ပုံပါ ေငြစကၠဴအား သုံးစြဲမရဟုဆို၍ျပန္ေပးခဲ့ပါသည္…သို႔ျဖစ္ပါ၍ ႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္ဥပေဒႏွင့္အညီထုတ္လုပ္ထားေသာေငြစကၠဴသည္ တန္ဖိုးအာမခံမရွိျဖစ္ေနပါသည္…
ထို႔အတြက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ပုံပါေငြစကၠဴသည္ တရားဝင္သုံးစြဲခြင့္တန္ဖိုးရွိမရွိသိခ်င္ပါသည္… စကၠဴသက္သက္ထုတ္ထားျခင္းျဖစ္လွ်င္လည္းသိမ္းထားပါေတာ့မည္…သို႔မဟုတ္ သုံးစြဲခြင့္ရွိလွ်င္လည္းသုံးမရေျပာသူအား မည္သို႔အေရးယူမည္ကိုသိခ်င္ပါသည္…ကိုလႈိင္ဝင္းထြန္း..၁၄/မမက ႏိုင္ ၁၅၄၇၆၇..” ေငြရွင္းရာမွာ လက္မခံတဲ့ အေျခအေနကို ေျပာျပထားတာပါ….
ဒါေၾကာင့္ လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာမွာ ေငြေခ်တာလက္မခံတဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ပိုက္ဆံအေၾကာင္းလူေျပာမ်ားေနတာျဖစ္ပါတယ္… ဒီလိုႀကီးေတာ့ မျဖစ္သင့္ပါဘူးေနာ္…ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကို ခ်စ္တဲ့ ပရိသတ္ႀကီးေရာ ဘယ္လိုျမင္လဲ ေျပာျပခဲ့ေနာ္..
Previous Previous post: အခက်အခဲတွေကြုံနေရင် ဒီဂါထာတော်လေးကိုပုံမှန်ရွတ်ကြည့်ပါ
Next Next post: နိုင်ငံခြားသူလေးနဲ့ လက်ထပ်ထားတဲ့ ကရင်ကောင်လေးတို့ လင်မယား ကလေးမွေးပြီ